R & D - Nanjing Akaberekwazve Nyowani Zvishandiso Co., Ltd.
Optical Brightener Mumiriri
Technical & Mushure mekutengesa sevhisi
Innovation uye R & D kugona kwemabhizinesi
Iko kugona kweR & D kugona kwemabhizinesi ndiyo hwaro hwekuona kusimudzira kusimudzira uye kwakakosha sosi yemakwikwi emabhizimusi. Iyo yakanaka R&D manejimendi system inotamba yakasimba basa rekutsigira mukumhanya-kumhanya mashandiro uye kuenderera kutora kwekukwikwidzana kwemabhizinesi.
Nekuwedzera kwemakwikwi enharaunda nharaunda, chigadzirwa uye tekinoroji kutsvagisa nekusimudzira yave nhandare huru yemabhizinesi kukwikwidza. Nekudaro, R&D manejimendi manejimendi ibasa rakazara rine matambudziko makuru. Maitiro ekuzadzisa zvido zvevatengi nemisika, kurongedza madhipatimendi uye zviwanikwa, kusimbisa musangano mashandiro, uye kurongedza zvikwata kunyatso kusimudzira kutsvagisa kweprojekiti nekusimudzira zvinoenderana nesainzi uye zvakarongeka kutsvagisa uye nzira dzekuvandudza yave nyaya yakakosha inofanirwa kutarisana nemabhizinesi azvino.
VAKABEREKWA VANOSIMBIRA "Iko kwakanaka kwekutarisira manejimendi, Hunhu hwekutanga, mutengi ndiye akakurisa" seyakakosha mutemo, simbisa kuzvivaka wega. Isu R&D zvigadzirwa zvitsva nekushandira pamwe neYunivhesiti, tichichengeta tichivandudza mhando yechigadzirwa uye sevhisi.
Mune ramangwana, isu tichazvipira pachedu kutsvagiridzo nekuvandudzwa kwenzvimbo nyowani dzepurasitiki dzekuwedzera zvakatipoteredza, kuita zvakasvibirira hunyanzvi, uye panguva imwechete kunatsiridza kuita kwese kwezvigadzirwa zvepolymer. Namatira kune yesainzi, zvine musoro uye kusimudzira kusimudzira.
Nekuvandudza uye kugadzirisa kweye indasitiri yekugadzira indasitiri, kambani yedu zvakare inopa yakakwana kubvunza masevhisi ekuvandudza kwemhiri kwemakungwa uye kubatanidzwa uye kuwanikwa kwemabhizimusi emhando yepamusoro. Panguva imwecheteyo, isu tinotora kunze kwemakemikari ekuwedzera uye mbishi zvinhu mhiri kwemakungwa zvinosangana nezvinodiwa zvemusika wepamba.
Nanjing Kuberekwazve Nyowani Zvishandiso Co., Ltd.
Kero: Chikamu 1409, 20 Xinghuo Road, Pukou Dunhu, Nanjing Guta, Jiangsu Province, China 210032